Gbasara Anyị - Reyoung Corp.
Reyoung Corp. Ekpobụ ọkachamara na-emepụta ọkpọkọ rọba na karama PET / HEPE maka ọtụtụ ngwa gụnyere ịchọ mma, nlekọta onwe onye, ​​ịma mma, nri, ọgwụ na ụlọ ọrụ. Anyị nakweere teknụzụ ọhụrụ na PCR / Sugarcane / PLA nke na-eme ka ọ dị mma na ihe dị ndụ.
Emepụtara ụlọ ọrụ ahụ ISO9001: 2015 Asambodo System Management System & ISO14001: 2015Asambodo System Management System. Anyị na-now mejupụtara nke ngwaahịa imewe, ebu development, extruding, isiokwu, ịfụ, ogwu ogbugba, dechapụ na silk ihuenyo ebi akwụkwọ, na-ekpo ọkụ-zọ, UV mkpuchi na eserese, agụụ plating, labeling, gbakọta nakwa dị ka nnyefe ndokwa.
Ugbu a, anyị etinyela akwụkwọ maka ọtụtụ patents ma nwee ọmarịcha mba na-emebe ndị otu. Dabere na uru nke ndị nwere ọgụgụ isi, ike ọrụ aka ọrụ na usoro njikwa ọgbara ọhụrụ, anyị agafeela nyocha nke ọma site n'ọtụtụ ụdị ndị ama ama ama gburugburu ụwa wee merie ntụkwasị obi na otuto ndị ahịa anyị.
R&Ddị oké mkpa nye anyị. Anyị emepewo ọgbara ọhụrụ doro anya na teknụzụ iji kwado njirimara ngwaahịa anyị. Ndị okike anyị na-emepụta ihe na-arụ ọrụ dị egwu iji mepụta ọtụtụ ngwaahịa siri ike. Ngwaahịa anyị nwere ike igboju nkwakọ ngwaahịa, yana ejiji na ogo. Anyị ga-eme ka imeri-mmeri ọnọdụ n’etiti anyị na anyị.
Mgbe afọ 15 nke persistent mgbalị, mgbe nile na a pụrụ ịdabere na àgwà na asọmpi ahịa, anyị na-otu n'ime ndị kasị ruru eru plastic-akpa emepụta na China. Anyị na ngwaahịa na-exported mba ụwa na mpaghara, dị ka Europe, North America na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ọzọ obodo ahịa ntụgharị nkezi 70% ka 30%.
E wezụga nke ahụ, anyị na-enye nkwakọ ngwaahịa nkwụsịtụ maka ndị ahịa anyị niile. Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọzọ abụọ maka kaadiboodu nkwakọ ngwaahịa yana ọrụ obibi akwụkwọ. A ga-anabata gị ka ukwuu iji nweta ozi ndị ọzọ site na ịga na webụsaịtị anyị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ozugbo.